Who were Bengali, so called Rohingya?: UNHCR မဟာမင်းကြီး MR-Antonio Guteeress က ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ခွဲ ခြားမသိသေး
UNHCR မဟာမင်းကြီး MR-Antonio Guteeress က ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ခွဲ ခြားမသိသေး
မနေ့ က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး -MR-Antonio Guteeress အခုလိုရှင်းလင်းပြောသွားတယ် --
( ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးက စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ် ဆိုတာဟာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေကြောင့် တခြားတိုင်းပြည်ကို ထွက်ပြေးလာသူ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ) -------
နေပြည်တော်မှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က Mr-Antonio Guteeress ကို အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ် --------
( ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ရေလမ်းမှတဆင့် ခိုးဝင်လာတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘဲ ခိုးဝင်လာသည့် ရိုင်ဂျာများကို လက်ခံရန် မည်သို့ မျှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တယ် )ဒီနေရာမှာ သူတို့ နှစ်ဦး ဘာတွေများ ကွာခြားနေကြတာလဲ ။ ဘယ်သူကများ လက်လွပ်စပ္ပါယ် ပြောကြားနေတာလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်
ကြရအောင် လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ် ။Mr Antonio စကားမှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကြောင့် ဆိုတဲ့စကားရပ် တခုကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ် ။ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးက သူသိနေတာက တိုင်းပြည်တပြည်မှာ အစိုးရက ဖိနှိပ်ကွပ်လို့-ဒါမှမဟုတ် အတိုက်အခံဖြစ်လို့ 
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်လို့နယ်စပ်ကျော်ပြီး ထွက်ပြေးလာသူတွေကို ဒုက္ခသည်များအဖြစ် အလွန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆိုတာထုတ်ဖေါ်ပြောသွားတာ ဖြစ်တယ် ။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံ လွပ်လွပ်ရေးမရခင် -၁၉၄၈-ခုနှစ် မတိုင်မှီ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ အစိုးရကလယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန် ခေါ်သွင်းခဲ့ သူများဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတယ် ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကနေပြီး ရေလမ်းမှတဆင့်
ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတယ် ။ ဒီနေရာမှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ခိုးဝင်လာသူများဟာသူတို့ နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင် မလုပ်နိုင်တာကြောင့် စီးပွါးရေး မချောင်လည်တာကြောင့် နယ်မြေအေးချမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုတရားမ၀င်လာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။ သူတို့ တွေဟာ လူဦးရေ အဆမတန်များပြား မွေးဖွါးကြလွန်းတဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ မျိုးဆက်ပြန့် ပွါးခြင်းကြောင့် နယ်မြေသစ်တွေကို တရား မ၀င်သည်ဖြစ်စေ ထွက်ခွါသွားနေကြတယ် ။။။။။။ဒီတော့ခါ အလွန်ထူးခြားတဲ့လူသားမျိုးပွါးခြင်းဆိုတဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ပြသနာကို ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး
မဟာမင်းကြီးဟာ စစ်မက်ဖြစ်ပွါးတာနဲ့ဖိနှိပ်ကွပ်တာနဲ့ထွက်ပြေးလာသူများလောက်ကိုသာ ကျွမ်းကျင်ကိုင်တွယ်နေတဲ့ အဆင့်လောက်နဲ့ မဆန်းစစ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို လာရောက်တွေ့ ဆုံနေတာဖြစ်တယ် ။ Mr-Antonio က မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ တွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောသွားတယ် ။သူဟာ နိုင်ငံခြားက NGOs-တခုဖြစ်တဲ့UNHCR က တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ် ။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်များရဲ့ 
ပကတိအခြေအနေကို လက်မခံဘဲ သူတို့ထင်သလို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လို့မရပါဘဲနဲ့ပြောသွားတာဖြစ်တယ် ။နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ် ။ ဒါဟာမိမိနိုင်ငံအကြောင်းကို အူမချေးခါးကအစ သိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မို့နိုင်ငံရေးစကားကို ဗြောင်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။
Mr Antonio က မိမိတို့UNHCR အနေနဲ့ရခိုင်လူမျိုး -ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး မခွဲခြားဘဲ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှဖြစ်တယ် လို့ပြောသွားတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီလူမျိုးဆိုတာဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကတည်းက မဟာမင်းကြီးဟာဒီလူမျိုးအတွက် ဘာမှ နာမည်တပ်ပြီး ပြောစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ် ။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖြစ်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးကို တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မယ်လို့ပြောတယ် ။ ဒါပေမဲ့ခိုးဝင်လာတဲ့သူတို့ တွေကိုတော့
-UNHCR- က တာဝန်ယူချင် ယူသွားပါလေ ဆိုပြီး ဖြေရှင်းနည်းကို ပြောပြလိုက်တယ် ။
မဟာမင်းကြီး Antonio က လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အတွက် အကူအညီ ပေးမယ်လို့ပြောသွားတယ် ။နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေက UNHCR နဲ့အခြား NGOs က ဘယ်အကူအညီ အထောက်အပံ့ကိုမျှ လက်မခံ မယူကြတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒုက္ခသည်စခမ်း ထဲကတောင် နှင်လွှတ်လိုက်ကြပြီဖြစ်တယ် ။
လက်မခံ မယူတဲ့သူတွေကိုတော့ ဘယ်လိုမှ စာရင်းလိမ်ပြပြီး ကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုတာ ရှင်းနေတယ် ။ ကုလသမဂ္ဂမှာ ဒီလိုNGOs တွေဟာ စာရင်းလိမ်ပြပြီး လိမ်စားညာစားနေကြတာ အများကြီး ရှိတယ် ။
မဟာမင်းကြီး Antonio က မိမိတို့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်ဟာ တကယ့်ဒုက္ခသည်များအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတယ် ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေတွေကို ရာလမ်းကို ပြန်ခေါ်သွားပါတော့လို့ပြောလိုက်တယ်-မှမဟုတ်ရင် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်အရ တတိယနိုင်ငံ တခုခုကို ပို့ ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် ပို့ ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ် ။
ဒီတော့ခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်မှာ ဘာတခုမှ လက်မခံတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာနိုင်တယ် ။ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး မဟာမင်းကြီး Mr Antonio Guteeress ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက
တကယ်အစစ်အမှန် ဒုက္ခသည်များဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ မလေးရှား နိုင်ငံ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေကို တတိယနိုင်ငံများသို့ဒုက္ခသည်များပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစသ်အရ အမြန်ဆုံး
လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် ။သူတို့ တွေဟာ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ခိုးဝင်ပြီး အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေကြရတာ မဟုတ်ဘူး ။ နေ့ တဓူဝ ဆင်းရဲခြင်း
ကြီးမားစွာနဲ့နေနေကြရတဲ့ဒုက္ခသည်များဖြစ်တယ် ။ အခုမြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က ခိုးဝင်လာတဲ့မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ ခိုးဝင်လာသည့်တိုင်အောင် ဒုက္ခကြီးစွာ နေထိုင်ရတာတွေ မဟုတ်ဘူး ။ပညာသင်ကြားခွင့်ရလို့ဒေါက်တာတွေ ကျောင်းဆရာတွေ အလုပ်သမားတွေ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ တပုံတခေါင်းရှိကြတယ် ။ အခုကနယ်မြေပိုင်ဆိုင်လိုတာနဲ့နိုင်ငံရေးပယောဂကြောင့် အခုလို အကြမ်းဖက်ပြီး အောက်လမ်းနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်လာကြတာဖြစ်တယ် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လွပ်လွပ်စွာ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်အရ လပ်ထက်ထိမ်းမြားတာကို မထိမ်းချုပ်နိုင်လို့အခုလို လူဦးရေပေါက်ဖွါးလာနေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ် ။ အသက်-၁၃-နှစ်ပြည့်လို့အပျိုဖေါ်ဝင်တာနဲ့လက်ထပ်ကြတဲ့သူတို့ လူမျိုးတွေဟာတမိသားစုမှာ အနည်းဆုံးလူဦးရေ ( ရ ) ယောက်လောက် ရှိနေတယ် ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ( ၁၆၀ ) လောက် ရှိနေတော့
အခုလိုဘဲ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို လက်ခံဖို့ငြင်းဆန်နေတာဖြစ်တယ် ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှင်္အစိုးရက ဆင်ခြေပေးထားတာက သူတို့ တွေဟာအကြမ်းဖက် တာလီဘန်တွေနဲ့အဆက်အသွယ် ရှိလို့လက်မခံဘူးလို့ပြောဆိုထားတယ်။သူတို တောင်မှ လက်မခံရင် ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံက လက်ခံပေးနေရမှာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိသာနိုင်တယ် ။
တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာနေတဲ့သူတို့ ကို မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက ဒါဟာ အစိုးရနဲ့ သာ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီး နေနေပေးကြတာဘဲဖြစ်တယ် ။ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ခွှင့်လွှတ်ပေးနေခဲ့ လို့ဒီ့လောက်အထိ လူဦးရေးများပြားနေတာဖြစ်တယ် ။သမိုင်းနဲ့ ချီလို့သိထားကြပေမဲ့ဒါကို မပြောမဆိုဘဲ နေခဲ့ ကြရတယ် ။ ခုတော့လဲဘဲ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ် မီးရို့ဒုက္ခသည်များဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လာတာဖြစ်တဲ့ အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားမယ်လို့သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားတယ် ။
ဒီတော့ခါ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ အရ သူတို့လူမျိုးကို လက်ခံတဲ့နိုင်ငံရှိရင်ပို့ ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးပြီဖြစ်တယ် ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောရရင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ကမဟာမင်းကြီး -Antonio Guteeress ကတောင်မှ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ဘာကို ဖွင့်ဆိုတာလဲ ဆိုတာ နားမလည်သေးဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပါဘဲ ။။။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 7:58 PM
Khaing Aung Kyaw, it's time to go back to your shit hole racist country as you couldn't open your eyes even living inacountry with so many different background. The author I believed is the military dog who want to dictate the country again. That's enough said for now.